ဆန်ဒကိုဘယျလိုအစားထိုးရမှာလဲ – My Blog
ထူးကြျော ဆုံးပွီးကတညျးက သီတာတဈယောကျ နစေ့ဉျလို မကျြရညျနှငျ့ မကျြခှကျဖွဈနရှောသညျ။ မိခငျဖွဈသူ နစေ့ဉျ ငိုနသေညျမို့လညျး ရှယျလီ လေးခမြာ အခြော့ခံရမညျ့အစား သူမ ကပငျ မိခငျဖွဈသူ သီတာကို ပွနျ၍ ခြော့မော့ရမလို ဖွဈနသေညျ။ အဆိုးဆုံးကား သီတာ အရကျသောကျတတျလာ၏။ သီတာ…အရကျသောကျတတျလာတာတော့ မကောငျးဘူး… အျော…အျော…ကိုခဈြထှနျးက ကမြကို သတိပေးဖျောရသေးသားပဲ…အဟတျဟတျ… ဒီနလေ့ညျး သီတာ တဈယောကျ ထုံးစံအတိုငျး မူးနပွေနျသညျ။ ကနြျောက စတေနာနဲ့ သတိပေးတာပါ သီတာ… စတေနာ…ဟလား…သီတာ့ကို ရှငျဘယျလောကျအထိ နားလညျထားသလဲ ကိုခဈြထှနျး… မှေးစငျးထားသော မကျြတောငျကော့ကွီးမြားဖွငျ့ သီတာက ခဈြထှနျးကို ခပျငေါ့ငေါ့မေးလိုကျသညျ။
ကနြျောက သီတာတို့လို ပညာတတျ တဈယောကျမဟုတျပါဘူး သီတာ…ရှငျးရှငျးပွောရရငျ သီတာ့ကို သနားမိလို့ ပါ…သသေူကပွနျရှငျရိုးမှ မရှိတာဘဲ…သီတာ… အဲဒါကွောငျ့ ကမြ ဒုက်ခလှလှတှတေ့ာပေါ့…ဟငျး…ဟငျး…သူ့ကွောငျ့ ကမြ ဘယျလိုဒုက်ခတှေ ခံစားနရေတယျဆိုတာကိုရော ရှငျသဘောပေါကျသလား ကိုခဈြထှနျး…ဟငျ…ပွောစမျးပါ… အာ…ပေါကျတာပေါ့…သီတာ…ပေါကျပါတယျ…လငျယောကျြားတဈယောကျ ဆုံးရှုံးရတဲ့ မိနျးမသားတဈယောကျ ဟာ လုံခွုံမှု အားကိုးမှုတှေ ကှယျပြောကျကုနျတာပေါ့…ဒါပဲလေ… ဟား…ကိုခဈြထှနျး ရှငျဟာ ကမြထငျတာထကျ ပိုညံ့တယျ…အတျောလေးညံ့တယျ…သိလား… ဗြာ… မဗြာနဲ့လေ…သိက်ခာတှေ သမာဓိတှနေဲ့ အရှကျအကွောကျတှကွေားမှာ ကမြရဲ့ ခန်ဓာကိုယျက ကာမဆန်ဒကို ဘယျ လိုအစားထိုးရမှာလဲ… သီတာ… ပုံမှနျလညျပတျ၍နသေော ကမ်ဘာကွီးသညျ ရုတျခညျြး ရပျတနျ့၍သှားသညျ။ ခဈြထှနျး အလနျ့တကွား အျောလိုကျ သညျ။ သီတာကိုလညျး အံ့သွ နှမွောတသစှာသော မကျြလုံးဖွငျ့ ကွညျ့သညျ။
ဟငျး…ဟငျး…ကိုခဈြထှနျး သီတာကို အထငျသေးသှားပွီ မဟုတျလား…ဟငျး…ဟငျး…ဒါပါဘဲ လောကကွီးက သဘာဝရဲ့ အမှနျတရားတခြို့ကို ပွောငျပွောငျတငျးတငျး ပွောဆိုဖို့ ခှငျ့မပေးပါဘူးလေ….မဟုတျဖူးလား…ဒီတော့ ကမြ ညဈတယျ…ဖောကျပွနျတယျ…တဏှာကွီးတဲ့ မိနျးမစာရငျးထဲလညျး ကမြ မပါခငျြဘူး တဏှာကွီးသူ မဖွဈခငျြဘူး…ဒီတော့ သောကျတယျ မူးတယျ မူးတော့ မမေ့ယျ ဒါကွောငျ့ သောကျတယျ… သီတာ ခဈြထှနျးကို မထမေကျြမွငျ တဲ့တဲ့ပွုံးပွပွီး အရကျခှကျကို မော့၍ သောကျခလြိုကျသညျ။ တကျတကျစငျသှား သော အရကျဖနျခှကျထဲသို့ အရကျထပျဖွညျ့ရနျအတှကျ ပုလငျးကို လကျလှမျးလိုကျပွနျသညျ။
တျောပွီ…သီတာ…သီတာ လှနျနပွေီ… ခဈြထှနျးက ဖွူလှသှယျလြှသော သီတာ၏ လကျလေးကို ဆတျကနဲ အပျေါမှ အုပျကိုငျပွီး ဟနျ့တားသညျ။ သီတာက သူ့လကျကို ခပျတငျးတငျး ဆုတျကိုငျထားသော ခဈြထှနျး၏ မကျြနှာကို ဆတျကနဲ မော့ကွညျ့သညျ။ ရှငျ…ကမြ အသားကို မထိနဲ့ ကိုခဈြထှနျး… သီတာ…ထပျမသောကျနဲ့လေ… ဒါ ကမြ အခှငျ့အရေးပါ…ရှငျ့ အပူမပါဘူး သီတာ့ အတှကျ ကနြျော တားနရေတာပါ… ဟငျး…ဟငျး…ဟငျး…ကိုခဈြထှနျး ရှငျဟာ အတျောမတရားတဲ့သူဘဲ…ဟငျး…ကမြ အရကျသောကျတာကို တားတယျနျော…ဟိုကားရုံက အခနျးထဲမှာ ရှငျ ကောငျမလေးတဈယောကျကို တဈညလုံးချေါပွီး လုပျနတောကတြော့ အဲ့ဒါ လူကောငျးတဈယောကျရဲ့ အကငျြ့လား ကိုခဈြထှနျး… ခဈြထှနျးက ဆုတျကိုငျထားသော သီတာလကျလေးကို ကယောငျကတမျးလှတျလိုကျမိရငျး ကုနျးထားသော ခါးကို ဆနျ့၍ ရပျလိုကျသညျ။
ပွောလေ…ကိုခဈြထှနျး ကနြျောက ယောကျြားလေးပါ သီတာ… အျော…အျော…ယောကျြလားတော့ ဖာခလြို့ရတယျ မိနျးမက ယောကျြားကို ခံခငျြတယျဆိုတော့ ဘယျလိုလုပျကွ သလဲဟငျ… တျောတော့ သီတာ…သီတာ သိပျမူးနပွေီ… ခဈြထှနျး၏ စိတျထဲ၌ မကွာမီ တစုံတရာ အမှားအယှငျးကွီး မှားယှငျးသှားမညျကို စိုးရိမျသှားသညျ။ သီတာ သောကျမညျ့ အရကျခှကျကို ခဈြထှနျးက အမှတျမဲ့လိုဖွငျ့ တိုကျခလြိုကျသညျ။ ယောကျြားတှေ မူးသလို မိနျးမတှရေော မူးလို့ မရဘူးလား ကိုခဈြထှနျး…ရမျးလို့မရဘူးလားဟငျ…ကိုယျလုပျခငျြ တာကို စှပျပွီးလုပျပဈဖို့ လောကကွီးက ဘာလို့ခှငျ့မပွုတာလဲဟငျ… ဒေါသနှငျ့ ဒယိမျးဒယိုငျထရပျရငျး အျောပွောလိုကျသော သီတာတဈယောကျ ဆိုဖာပျေါသို့ ဝရုနျးသုနျးကား ပွနျပွီးလဲ ကသြှားရာ သူမ၏ ခပျရော့ရော့ထဘီလေးက ဖတျြကနဲ ကြှတျပွီး ပေါငျလညျထိ လြှောဆငျးသှား၏။ ဆီးခုံမှ မှေးညှငျးနုနုနှငျ့ အိဝငျးမှညျ့တငျးနသေော တငျပါးကွီးအစုံက မိမှေးတိုငျ ဖမှေးတိုငျးဖွဈကာ ခဈြထှနျး၏ မကျြလုံးမြားကို ပွူးကယျြသှားစေ သညျ။
ကိုခဈြထှနျး… ဗြာ…သီတာ… ရှငျ သီတာကို မသနားဘူးလား ဟငျ… သ..သနားပါတယျ…သီတာ… ကမြကို နားရောလညျပွီလား ဟငျ… ငိုသံအကျအကျလေးနှငျ့ ပွောရငျး သီတာ၏ လကျလေးတဈဖကျက သူမ၏ စောကျမှေးလေးမြားကို ရှရှလေးပှတျ၏။ ဆိုဖာကို ကြောမှီထားရငျး အခွားလကျတဈဖကျဖွငျ့လညျး ဝငျးစကျစကျ နို့ကွီးနှဈလုံးကို ဆှဲလှနျလိုကျသညျ။ ပွောလေ…ကိုခဈြထှနျး… နား…နားလညျပါတယျ…သီတာရယျ… ခဈြထှနျး၏ ဒူးတှေ တဆတျဆတျတုနျနသေညျ။ အိအိစိုစို ခန်ဓာကိုယျမယျလေး၏ ရာဂခိုးဝသေော မကျြလုံးအစုံကိုပငျ သူရငျမဆိုငျရဲပေ။ မဖွဈစဖူး ရငျခုံသံကွီးက ကယျြလောငျစှာ ထှကျပျေါလာပွီး အလိုလိုနရေငျး ရငျမောလာသညျ။ ကြောကျ ရုပျကွီးတဈရုပျနှယျ ခွစေုံရပျကာ လကျနှဈဖကျကို ဆနျ့ဆနျ့ကွီးခရြပျနသေော ခဈြထှနျး၏ ပုဆိုးကွားမှ တစုံတရာသညျ ထောငျ၍ထကာ ရှသေို့ငေါထှကျလာသညျ။ သီတာက ဒါကို မွငျသညျ။ ပွုံးရိပျလေးသနျးနသေညျ။ ဗိုကျအောကျမှ ကှေးဆငျး ငုံ့ဝငျနသေော စောကျပတျလေးကို အထကျသို့ကော့တငျပဈလိုကျပွနျသညျ။
အသားဆှတျဆှတျဖွူသော သီတာ၏ စောကျပတျကွီးမှာ ဖောငျးအိစှငျ့ကားနပွေီး စောကျပတျတဈခွမျးကို လကျကလေးနှငျ့ မသိမသာဆှဲဖွဲထားသဖွငျ့ ရဲနသေော အတှငျးသားနီနီလေးကို ကွညျ့ရငျး ခဈြထှနျး တံတှေးကို ဂလုကနဲ မွိုခလြိုကျမိလသေညျ။ ထိုငျးကနဲ ထောငျးကနဲ အခြုပျအထိနျးမရှိ ထောငျလာသော လီးတနျကွီးက ပုဆိုးကွားမှ အရုပျဆိုးစှာ ထိုးထှကျလာ ပါလသေညျ။ ခဈြထှနျး၏ ခွအေစုံက မူလီစုပျထားသလို မရှေ့ ခန်ဓာကိုယျကွီးကသာ သံလိုကျအား အဆှဲခံရသော သံထညျ ကွီးတဈခုလိုရှသေို့ ငိုကျငိုကျသှားလိုကျ ပွနျပွီး တငျးမတျလာလိုကျဖွဈနသေညျ။ ရှငျ…ကမြကို နားလညျတယျဆို… အဈတဈတဈ တိုးအကျအကျ အသံလေးက ရှတတလေး တိုးညှငျးငွိမျသကျစှာ ပျေါလာသညျ။ ခဈြထှနျးစိုကျကွညျ့နေ သညျ့ စောကျပတျဖှေးဖှေးကွီး၏ အကှဲကွောငျးရဲရဲလေးထဲမှ စောကျစနေီ့နီလေး။ လာလေ…ကိုခဈြထှနျး… သံလိုကျဆှဲငငျအားထကျ ပွငျးသော ဣတ်ထိယဆှဲငငျအားကွောငျ့ ခဈြထှနျးသညျ သီတာရှိရာသို့ ဒရှတျတိုကျကွီး ရှလြေ့ားရောကျရှိသှားသညျ။ သီတာက ခဈြထှနျး၏ ပုဆိုးကို ဆှဲ၍ခြှတျခလြိုကျသညျ။
ဒိုငျးကနဲ ပုဆိုးကွားမှ ကနျထှကျလာ သော ကွီးမားတငျးပွောငျနသေော လီးတနျကွီးကို သီတာက ဖောငျးကဈဖွူဖှေး၍ သှယျလြှနသေော သူမ၏ လကျခြောငျး လေးမြားဖွငျ့ အထကျအောကျဆငျ့ကာ လကျနှဈဖကျဖွငျ့ ဖှဖှလေး ဆုတျကိုငျလိုကျပွီး လီးတနျကွီးကို ဖွဲခလြိုကျသညျ။ လီးတနျကွီး၏ ထိပျဖူးကွီးက ညိုမဲနပွေီး အတှငျးပိုငျး ဒဈအောကျခွေ၌ အနညျးငယျနီရောငျသနျးနသေညျ။ ဆုတျကိုငျထား သော သီတာ၏ လကျလေးနှဈဖကျ အတှငျး၌ လီးကွီးမှာ လြှံထှကျနသေညျ။ တဈပတျဆုတျ၍ မနိုငျအောငျ လုံးပတျကွီးက ထှားကွိုငျးလှသညျ။ ရှငျဟာ ယောကျြားပီသလှနျးသူ တဈယောကျပဲ ရှငျ… သီတာက အသိတရားမဲ့သော ကာမနှံအတှငျးသို့ တရဈရဈတိုးဆငျးနဈမွုပျစပွုလာသညျ။
ရှမျးစိုနီရဲသော နှုတျခမျး လေးအစုံဖွငျ့ လီးတနျကွီးကို ငုံလိုကျကာ အတှငျး၌ လြှာဖြားလေးဖွငျ့ မထိတထိလေး ကလိ၏။ အ….ကြှတျ…အငျး…အငျး…အငျး…သီတာရယျ… ခဈြထှနျး၏ လကျနှဈဖကျက သီတာ၏ နောကျကြောမှ ဆိုဖာကြောမှီကို ဆတျကနဲ လှမျး၍ ထောကျလိုကျသညျ။ ဆီးခုံကွီးပျေါ၌ ထောငျထနသေော လမှေးကွီးမြားမှာ ရှဲကနဲ ထောငျထသှားပွီး ထောငျထ အုံကွှကုနျသညျ။ ပေါငျခွံတဝိုကျ သာမက ဖငျကွီးမြားပါ ကွကျသီးလေးမြား အစီအရီပျေါထှကျလာကွသညျ။ သီတာက ပါးစပျအတှငျးမှ ဒဈကွီးကို အသာပွနျ ဆုတျပွီး ဒဈခြိုငျ့ထဲသို့ လြှာဖြားလေးဖွငျ့ ခပျဖိဖိလေး ထိုးဖိကာ ရဈဝိုကျကစားလိုကျသောအခါ…
အား…အား….သီတာ…သီတာ…ရယျ…အဟငျး…ဟငျး…. ခဈြထှနျး၏ ပေါငျကွီးနှဈဖကျက ဘေးသို့ ကားသှားပွီး သီတာ၏ ပါးစပျလေးထဲသို့ လီးကို ဖိသှငျးလိုကျမိ၏။ လကျနှဈ ဖကျဖွငျ့ တငျးတငျးဆုတျကိုငျထားမှုကွောငျ့ လီးကွီးက သီတာ၏ ပါးစပျထဲသို့ (၂)လကျမခနျ့သာ ဝငျသှား၏။ သီတာက လီး ထိပျဖူးကွီးကို မိမိရရစုပျထားပွီး သူ၏ လြှာလေးကို မာကဈြလြှကျ ဒဈကွီးကို ဝိုကျ၍၎င်းငျး ထိပျဖူးကွီးကို လြှာဖြားဖွငျ့ ထိုးလိုကျ လြှာပွားဖွငျ့ ယကျလိုကျ လုပျပေးသညျ။
ဟား…အား…အို့အိုး…ကြှတျ…ကြှတျ…ကြှတျ…. ခဈြထှနျး၏ မကျြနှာကွီးက မကျြနှာကကျြဆီသို့ မော့လိုကျ သီတာလုပျနပေုံကို ငုံ့ကွညျ့လိုကျဖွငျ့ ဂဏာမငွိမျအောငျ ဖွဈနပွေီး နှုတျခမျးကိုလညျး လြှာဖွငျ့ အကွိမျကွိမျယကျနမေိသညျ။ လီးတနျကွီးကမူလထကျ (၂)ဆခနျ့ ထှားလာပွီး အံ့ဖှယျ ကောငျးလောကျအောငျပငျ မာကွောလာ၏။ အကွောမြား အပွိုငျးပွိုငျးထလာသညျ။ ခပျမော့မော့ကွီး ထောငျနသေော လီးဒဈကွီးက မီးခြောငျးရောငျဖွငျ့ တဖွတျဖွတျတောကျပကာ တံတှေးလေးမြားဖွငျ့ စိုစှတျပွောငျတငျးလာသညျ။ ရှငျ…ဒီမှာထိုငျပါလား ကိုခဈြထှနျး… သီတာက ခဈြထှနျးကို လေးယောကျထိုငျ ဆိုဖာကွီးပျေါ၌ ထိုငျခိုငျးသညျ။ ခဈြထှနျးကလညျး သံပတျပေးထားသော အရုပျတဈရုပျပမာ ထိုငျခလြိုကျသညျ။ ခဈြထှနျး၏ လီးတနျကွီးက ကိုးဆယျဒီဂရီ မတျတောငျပွီး ခေါငျးမော့လြှကျရှိသညျ။ သီတာက သူမထဘီကို ခွထေောကျမှ ခြှတျယူပွီး ဆိုဖာလကျတနျးပျေါသို့ တငျထားလိုကျသညျ။
ထဘီမရှိသော သီတာ၏ အောကျပိုငျးကွီးက ယောကျြားနှငျ့ လေးလ လောကျဝေးသှားသညျ့အခြိနျမှာပငျ အားသဈအငျသဈတှနှေငျ့ ဖှံ့ဖွိုးစှငျ့ကားလြှကျ ပိုမိုတငျးမောကျလြှကျရှိလသေညျ။ သီတာ၏ ခွတေဈဖကျက ခဈြထှနျး၏ ခါးမှ ဖွတျလြှကျ ကြျောခှလိုကျစဉျ ကွမျးရှရှ ခွဖေဝါး လေးနှငျ့ လီးထိပျကွီးကို တိုကျမိသှားသေးသညျ။ အို…ကနျတော့… သီတာက ရုတျတရကျ တောငျးပနျရငျး ခဈြထှနျး၏ ပုခုံးနှဈဖကျကို သူမ၏ လကျလေးနှဈဖကျဖွငျ့ စုံကိုငျကာ ခဈြထှနျး၏ လီးတဲ့တဲ့ပျေါသို့ စောကျပတျအဝကိုတပွေီ့း ဖွေးဖွေးခငျြးထိုငျခသြညျ။ ဗွဈ…ပွှတျ…ဗွဈ…ဘလှတျ… အား…အား…နာတယျ…သိလား… ခဈြထှနျးက သီတာ၏ ခါးလေးကို လကျနှဈဖကျဖွငျ့ ဇတျကနဲ ဆုတျကိုငျရငျး ခပျတိုးတိုး အျောလိုကျသညျ။ သီတာက ကွားဟနျမတူ တငျးရငျးပွညျ့အငျ့စှာ လိုးသှငျးနသေော အရသာကို အံလေးကွိတျကာ ခံစားရငျး မကျြနှာကို အပျေါမော့ပွီး ဂှေးစိနှငျ့ ဖငျကွီးထိသညျအထိ ထိုငျခလြိုကျလသေညျ။
ဗွဈ…ဗွဈ…ဒုတျ… အေ့…အငျး… သီတာ၏ ဖငျကွီး ခကျြခငျြးပွနျကွှတကျသှားသညျ။ ရှညျလြှားသော လီးကွီးက စောကျခေါငျးနုနုလေးကို မာကွောစှာ ထိုးဆောငျ့မိသှားပုံရလသေညျ။ နို့ကွီးနှဈလုံးက ခဈြထှနျး၏ မကျြနှာရှဝေ့ယျ အိပဲ့ အိပဲ့နှငျ့ ရှိနသေညျမို့ ခဈြထှနျးက သီတာ၏ မကျမောဖှယျကောငျးလှသော နို့ကွီးနှဈလုံးကို တဈလုံးပွီးတဈလုံး အားရပါးရကွီးစို့နမေိသညျ။ သီတာ၏ ခန်ဓာကိုယျအတှငျးမှ သှေးသားမြား စုပွုံပေါကျကှဲသှားသညျ။ စောကျခေါငျးထဲမှ အရမြေားက ဒလဟော ပွိုဆငျးလာကွသညျ။ ခဈြထှနျး၏ မာတငျး မာကွောနသေော အကွောတှထေနသေညျ့ လီးတနျကွီးကို တစတစ စိုစှတျပွောငျဝငျးသှားစသေညျ။ သီတာက ဇှတျကနဲ ဇှတျကနဲ ထိုငျခလြိုကျတိုငျး လီးကွီးထိပျဖြားက အစှမျးကုနျ ပွဲကားထားသော သီတာ၏ စောကျခေါငျးထဲသို့ တိုး၍ တိုး၍ သူမ၏ စောကျစလေ့ေးကို ဖိပှတျကာ ဝငျ၍သှားသညျ။
သီတာ၏ ဖငျသားကွီးမြားက အောကျမှ ဆိုဖာပျေါတှငျ ထိုငျနသေော ခဈြထှနျး၏ ပေါငျပျေါသို့ ထိုငျခမြိလြှကျပငျ ခဈြထှနျး၏ သနျမာသော လကျနှဈဖကျက သူမ၏ ဂြိုငျးအောကျမှ လြှို၍ သီတာ၏ ကိုယျလုံးလေးကို ကွုံး၍ ဖကျလိုကျကာ မတျတပျရပျလိုကျတော့ရာ သီတာ၏ ခွထေောကျလေးနှဈဖကျကလညျး ခဈြထှနျး၏ ခါးကွီးကို ခြိတျကိုငျညှပျလိုကျကာ သီတာ ခမြာ သနျမာထှားကွိုငျးသော ခဈြထှနျး၏ လီးကွီးပျေါ၌ ဒနျးစီးနရေသလို ခပျကော့ကော့လေးပါသှားလသေညျ။ ဘယျလို လိုးမလဲဟငျ…ကို စားပှဲပျေါကို တငျလိုးပေးမယျလေ… အငျ…မကွိုကျပါဘူး… သီတာက ခဈြထှနျး၏ လညျပငျးကို ဟီးလေးခိုကာ မကျြစောငျးလေးထိုးကာ နှုတျခမျးလေးကို စူတူတူလေး လုပျ၍ ပွောသညျ။ အို…ကဲပါ…ပထမ တဈခြီတော့ ကို ကွိုကျသလိုလုပျ…နောကျတဈခြီကမြှ သီတာပွောသလိုလုပျ…ဒါပဲ… ခဈြထှနျးက သူမကို ဒီအတိုငျးပငျထား၍ လကျတဈဖကျက သူမ၏ ခါးကို သိုငျးဖကျကာ လီးကွီးကို တဈခကျြ ညောငျ့ လိုကျသညျ။
ပွှတျ… အငျ့… ကဲပါ…အခုနက အကိုပွောသလိုပဲ စားပှဲပျေါတငျပွီး လုပျကွညျ့ လိုးကွညျ့အုံးလေ… သီတာ၏ အပွောနှဲ့နှဲ့ တိုးတိုးလေးနှငျ့ သီတာ၏ အပွုံးနုနုခြှဲခြှဲလေးတှသေညျ ခဈြထှနျးကို တငျးတငျးကွီး ရဈပတျ နှောငျဖှဲ့မိကွသညျ။ ခြောမောလှပလှနျးသော စညျးစိမျ ဥစ်စာ ကွှယျဝလှနျးသော သီတာကို လိုးခှငျ့ကွုံရသညျ့အတှကျ ခဈြထှနျး ကနြေပျအံ့သွနရေသညျ။ သီတာကို စားပှဲပျေါ ပကျလကျလေး တငျလိုကျပွီး ခွနှေဈဖကျကို အထကျသို့ တှနျးတငျ လိုကျသညျ။ ထိုအခါကမြှ စောကျပတျဖွူဖွူကွီးထဲသို့ တငျးကွပျပွညျ့ကွပျစှာ ထိုးသှငျးထားသော လီးမဲမဲကွီးကို ထငျရှားစှာ တှရေ့သညျ။ ခဈြထှနျးသညျ ကွမျးပွငျပျေါမှပငျ မတျတပျရပျကာ သီတာ၏ ဖွူဖှေးသော စောကျပတျကွီးကို ဆှဲဖွဲလိုကျပွီး လီးတနျကွီးကို သီတာ၏ စောကျဖုတျကွီးထဲမှ တဆုံးနီးပါး ဆှဲထုတျ၍ ပွနျ၍ တဆုံးဝငျအောငျပငျ ဆောငျ့၍ လိုးသှငျးခလြိုကျ လသေညျ။
ပွှတျ…ဗွဈ…ဘှပျ… အမလေး…ကိုရယျ…ကြှတျ…ကြှတျ… စားပှဲပျေါလဲလြှောငျးထားသော သီတာ၏ ကြောပွငျလေးက စားပှဲပျေါမှ ကွှတကျသှားပွီး ပွနျကသြှားသညျ။ ဖွူဝငျး အိစကျသော စောကျပတျ ဖှေးဖှေးကွီးထဲသို့ ညိုမဲပွောငျတငျးနသေော လီးတနျကွီးက ဇိကနဲ ဇတျကနဲ ဆောငျ့သှငျးလိုကျပွနျ သညျ။ ပွှတျ…ပွှတျ…ပွှတျ… အ….အမလေး…အသဲကို ခိုကျသှားတာဘဲ ကိုရယျ…အား…ဟငျး…ဟငျး… ခဈြထှနျး၏ လီးတနျကွီးက သီတာ၏ စောကျပတျကွီးထဲသို့ မဆနျ့မပွဲဝငျကာ သူမ၏ စောကျပတျဝမှ စောကျစေ့ လေးကို ဖိ၍ ပှတျတိုကျနရော သီတာမှာ ဖွတျဖွတျလူး၍နရေသညျ။
ပွှတျ…ပွှတျ…ပွှတျ…အား….အ…. အား…ကြှတျ….ဆောငျ့… .အားရပါးရဆောငျ့စမျးပါ….လိုးစမျးပါ ကိုရယျ သီတာကို မညှာနဲ့ သိလား…အ…အား…ဆောငျ့….ဆောငျ့စမျးပါ…. သီတာသညျ သူမ၏ မကျြလုံးလေးကို မဖှငျ့သေးဘဲ တတှတျတှတျပွောလိုကျ စောကျပတျကွီးကို ကော့ပေးလိုကျဖွငျ့ အငွိမျမနဘေဲ ခေါငျးလေးကလညျး ဘယျညာရမျးခါ၍ နလေသေညျ။ ခဈြထှနျးကလညျး တကယျကို အားရပါးရကွီးပငျ ဆောငျ့၍ ဆောငျ့၍ လိုးနသေညျ။ ပွှတျ…ပွှတျ…ဗွဈ…ပွှတျ…ဗွဈ… ဆောငျ့…နာနာသာ ဆောငျ့…သိလား သီတာ ခံနိုငျတယျ…အထဲမှာ တဈခကျြ တဈခကျြပဲ ကငျြကနဲ ကငျြကနဲ ဖွဈဖွဈသှားတာ သီတာခံနိုငျပါတယျ…ဆောငျ့ထညျ့လိုကျစမျးပါ…ကိုရယျ…ခပျနာနာလေးသာ ဖိဆောငျ့…ဆောငျ့…ဆောငျ့ အုံး… သီတာသညျ ရမ်မကျစိတျတှေ အမွငျ့ဆုံးသို့ ရောကျလာဟနျတူသညျ။ တကိုယျလုံးက အကွောတှကေ တငျးလာပွီး တှနျ့လိမျကောကျကှေးလာသညျ။ သီတာ၏ လကျကလေးမြားက သူမ၏ ဆီးစပျတှငျပေါကျနသေော စောကျမှေးလေးမြားကို ဖိ၍ ပှတျလိုကျ ကွီးမားသော သူမ၏ နို့ကွီးနှဈလုံးကို ဆှဲညှဈလိုကျဖွငျ့ မခြိမဆနျ့ခံစားနရေလသေညျ။
ပွှတျ…ဘှတျ…ဘှတျ…ပွဈ….ဗွဈ… အာ…ဟား…အငျ့….အ…ဟား… .ရှီး…ကြှတျ… ခဈြထှနျး၏ ဖငျကွီးက အနောကျသို့ ဆုတျဆုတျပွီး အားယူကာ လီးခြောငျးကွီးကို စောကျဖုတျထဲမှ ဆှဲ၍ ဆှဲ၍ ထုတျ လိုကျတိုငျး လီးခြောငျးကွီးတဈလြှောကျ တောကျပွောငျကာနရေသညျ။ လီးတနျကွီးကို ဆောငျ့သှငျးလိုကျတိုငျး စောကျပတျ အုံကွီးက ဖောငျးကနဲ ကွှတကျသှားပွီး လီးတနျကွီးက အရှိနျဖွငျ့ စောကျဖုတျကွီးထဲသို့ မွုပျ၍ မွုပျ၍ ဝငျသှားရလသေညျ။ အငျ့…အငျး….ကောငျးလိုကျတာ….ကိုရယျ….အငျ့…ဟငျး…ဟငျး…. သီတာက တဖွေးဖွေး ငွိမျသကျစပွုလာရငျး ပါးစပျမှ မပှငျ့တပှငျ့လေး ညီးရှာလသေညျ။
သီတာ….ပွီးသှားပွီလား…ဟငျ… သှားပါ…သူက သိပျကွာတာဘဲ…သီတာဖွငျ့ နှဈခါတောငျပွီးသှားတယျ…သူ သိပျထနျတာဘဲ…ဟှနျး… သီတာက ရမ်မကျရှိနျမပွသေေးဟနျဖွငျ့ ခပျညုညုလေးပွောသညျ။ အကိုက မပွီးသေးဘူး…ဆကျလိုးအုံးမှာ သီတာ အလိုးခံနိုငျသေးတယျ မဟုတျလား… ခံမယျ…ဘာလို့ မခံနိုငျရမှာလဲ ရှငျ လိုးနိုငျသမြှ ကမြက ခံမယျ… ဟုတျပွီ…ဒါဆိုရငျ အကိုက ဒီပုံစံအတိုငျးဘဲ ဆကျလိုးမယျ… စကားပွောနရေငျးက ခဈြထှနျး၏ ကိုယျလုံးကွီးက တလှုပျလှုပျနှငျ့ ဖွဈနသေဖွငျ့ သီတာ၏ စောကျပတျကွီးထဲသို့ တဈဆုံးဝငျ၍နသေော ခဈြထှနျး၏ လီးတနျကွီးက တလှုပျလှုပျဖွငျ့ ဖွဈ၍နသေဖွငျ့ သီတာ၏ စောကျပတျအတှငျးသားနုနု လေးမြားကို လီးတနျကွီးက ပှတျသပျထိုးဆှသကဲ့သို့ ဖွဈနလေသေညျ။ အငျး…လုပျ…လုပျခငျြလဲ လုပျလေ…အကို ကလဲ… သူမ၏ ဝတျလဈစလဈကိုယျလုံးလေး တဈခုလုံးကို မကျြတောငျမခတျ ခဏတာ ရပျ၍ ကွညျ့နသေော ခဈြထှနျးကို သီတာက စိတျမရှညျစှာဖွငျ့ ပွောသညျ။ သီတာ၏ စကားအဆုံးမှာပငျ ခဈြထှနျးက သူ၏ လီးတနျကွီးကို သီတာ၏ စောကျ ခေါငျးထဲမှ ဆှဲထုတျကာ ဆောငျ့၍လိုးတော့သညျ။
ခဈြထှနျး၏ အသကျပွငျးပွငျးရှုသံ၊ သီတာ၏ ညီးညူ မွညျတမျးသံမြား သညျ အခနျးထဲတှငျ ပဲ့တငျထပျ၍နသေညျ။ ထို့ပွငျ ဆီးစပျခငျြးရိုကျမိရာမှ ထှကျပျေါလာသော တဖတျဖတျဆိုသော အသံနှငျ့ ခဈြထှနျး၏ ဂှေးအုကွီးတှကေ သီတာ၏ ဖငျဆုံကွီးကို ထိမိတဲ့ အသံတဖတျြဖတျြဆိုသော အသံတှမှော ဆကျတိုကျထှကျပျေါ ၍ နရေလသေညျ။ စောကျရညျမြား စိုရှဲနသေော သီတာ၏ စောကျပတျထဲသို့ ခဈြထှနျး၏ လီးခြောငျးကွီးက တရှိနျထိုးဆောငျ့ ထိုးသှငျးလိုကျသော တဘှတျဘှတျ အသံမြားကလညျး ဆကျတိုကျ ထှကျပျေါ၍နလေသေညျ။
ဘှတျ..ဖတျ…ပပျြ…ဘှပျ…ဗွဈ…ပွှတျ.ဘှတျ…. အားပါး…ရှီး…ဆောငျ့….ဆောငျ့ ကမြကို တအားဆောငျ့လိုးစမျးပါရှငျ…ဟငျး…ဟငျး…အကို့ လီး ခြောငျးကွီး တဈခြောငျးလုံး အဆုံးထိ တခကျြထဲနဲ့ ထိုးစိုကျလိုကျစမျးပါ…ခံလို့ ကောငျးလှနျးလို့ပါ…အငျး…အား…ပါး… ဟငျး… ဘှပျ…ဗွဈ…ပွှတျ…ပလှတျ…ဘှပျ… အား ဟုတျပွီ…အဲလို…အဲလို…ဟငျး…ဆောငျ့ ဆောငျ့…အဖုတျကှဲခငျြ ကှဲသှားစမျးပါစေ….အမလေး. …ကောငျးလိုကျတာ ရှငျ…အား… အားပွငျးထိမိလှသော ခဈြထှနျး၏ ဆောငျ့ခကျြတှကေို ရငျသိမျ့တုနျအောငျခံရငျး သီတာတဈယောကျ နောကျတဈခြီ ထပျပွီး သှားသညျ။ သူမ၏ လငျယောကျြားနဲ့ပငျ တခြီကောငျးလောကျသာ ပွီးခဲ့သော သီတာတဈယောကျ ခဈြထှနျး လိုးတာကို ခံရတော့မှ တသကျနှငျ့တကိုယျ ဆကျတိုကျပွီးတဲ့ အရသာကို တုနျခါ မောဟိုကျအောငျ ခံစား၍ နရေတော့သညျ။ သီတာ (၃)ခြီမွောကျပွီးသှားသညျ့အခြိနျတှငျ ခဈြထှနျးသညျ တရှူးရှူးဖွငျ့ အသကျရှူတှေ အရမျးမွနျလာသညျ။
ဆောငျ့လိုး ခကျြတှကေလညျး ကွမျးသထကျ ကွမျး…မွနျသထကျ မွနျ၍လာသညျ။ ခဈြထှနျး တဈယောကျ ပွီးကာနီး၍လာပွီဆိုသညျကို သီတာက သိသညျ။ ခဈြထှနျးတဈယောကျ အရသာ ပိုရှိအောငျ လုပျပေးခငျြသော သီတာက သူမ၏ ဖငျလုံးလုံးကဈြကဈြ လေးကိုအသာ ပတျကြျောပွီး ခဈြထှနျး၏ ဂှေးအုမြားကို လကျနဲ့အသာ လှမျးကိုငျလိုကျပွီး ဖှဖှလေး ဆုတျနယျပေးသညျ။ ခဈြထှနျးတဈယောကျ အရသာတှသှေ့ားတာ သခြောသညျ။ အသကျရှူတာ ပိုမွနျလာသလို ဆောငျ့လိုးခကျြတှကေ လညျး ပို၍အားပွငျးပွီး ပို၍ ကွမျးလာသညျ။ ထို့နောကျ ခဈြထှနျး၏ လီးကွီး ငေါကျကနဲ ငေါကျကနဲ ဖွဈသှားခြိနျမှာပငျ သီတာ က သူမ၏ စောကျဖုတျကို ညှဈ၍ သူ၏ လီးကွီးကို စောကျဖုတျဖွငျ့ ညှဈယူလိုကျတော့ရာ ခဈြထှနျး၏ လီးထိပျက သုတျရညျ မြားက ပနျး၍ ထှကျလာတော့သညျ။ သီတာ၏ စောကျဖုတျထဲသို့ အရှိနျပွငျးပွငျးဖွငျ့ ပူကနဲ နှေးကနဲ သုတျရညျမြားပနျးဝငျ ထိတှလေို့ကျသညျ့အခြိနျမှာပငျ သီတာတဈယောကျ လေးကွိမျမွောကျ ပွီး၍ သှားရလတေော့သညျ။ ပွီးပါပွီ။
ထူးကျော် ဆုံးပြီးကတည်းက သီတာတစ်ယောက် နေ့စဉ်လို မျက်ရည်နှင့် မျက်ခွက်ဖြစ်နေရှာသည်။ မိခင်ဖြစ်သူ နေ့စဉ် ငိုနေသည်မို့လည်း ရှယ်လီ လေးခမျာ အချော့ခံရမည့်အစား သူမ ကပင် မိခင်ဖြစ်သူ သီတာကို ပြန်၍ ချော့မော့ရမလို ဖြစ်နေသည်။ အဆိုးဆုံးကား သီတာ အရက်သောက်တတ်လာ၏။ သီတာ…အရက်သောက်တတ်လာတာတော့ မကောင်းဘူး… အော်…အော်…ကိုချစ်ထွန်းက ကျမကို သတိပေးဖော်ရသေးသားပဲ…အဟတ်ဟတ်… ဒီနေ့လည်း သီတာ တစ်ယောက် ထုံးစံအတိုင်း မူးနေပြန်သည်။ ကျနော်က စေတနာနဲ့ သတိပေးတာပါ သီတာ… စေတနာ…ဟလား…သီတာ့ကို ရှင်ဘယ်လောက်အထိ နားလည်ထားသလဲ ကိုချစ်ထွန်း… မှေးစင်းထားသော မျက်တောင်ကော့ကြီးများဖြင့် သီတာက ချစ်ထွန်းကို ခပ်ငေါ့ငေါ့မေးလိုက်သည်။
ကျနော်က သီတာတို့လို ပညာတတ် တစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူး သီတာ…ရှင်းရှင်းပြောရရင် သီတာ့ကို သနားမိလို့ ပါ…သေသူကပြန်ရှင်ရိုးမှ မရှိတာဘဲ…သီတာ… အဲဒါကြောင့် ကျမ ဒုက္ခလှလှတွေ့တာပေါ့…ဟင်း…ဟင်း…သူ့ကြောင့် ကျမ ဘယ်လိုဒုက္ခတွေ ခံစားနေရတယ်ဆိုတာကိုရော ရှင်သဘောပေါက်သလား ကိုချစ်ထွန်း…ဟင်…ပြောစမ်းပါ… အာ…ပေါက်တာပေါ့…သီတာ…ပေါက်ပါတယ်…လင်ယောက်ျားတစ်ယောက် ဆုံးရှုံးရတဲ့ မိန်းမသားတစ်ယောက် ဟာ လုံခြုံမှု အားကိုးမှုတွေ ကွယ်ပျောက်ကုန်တာပေါ့…ဒါပဲလေ… ဟား…ကိုချစ်ထွန်း ရှင်ဟာ ကျမထင်တာထက် ပိုညံ့တယ်…အတော်လေးညံ့တယ်…သိလား… ဗျာ… မဗျာနဲ့လေ…သိက္ခာတွေ သမာဓိတွေနဲ့ အရှက်အကြောက်တွေကြားမှာ ကျမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က ကာမဆန္ဒကို ဘယ် လိုအစားထိုးရမှာလဲ… သီတာ… ပုံမှန်လည်ပတ်၍နေသော ကမ္ဘာကြီးသည် ရုတ်ချည်း ရပ်တန့်၍သွားသည်။ ချစ်ထွန်း အလန့်တကြား အော်လိုက် သည်။ သီတာကိုလည်း အံ့သြ နှမြောတသစွာသော မျက်လုံးဖြင့် ကြည့်သည်။
ဟင်း…ဟင်း…ကိုချစ်ထွန်း သီတာကို အထင်သေးသွားပြီ မဟုတ်လား…ဟင်း…ဟင်း…ဒါပါဘဲ လောကကြီးက သဘာဝရဲ့ အမှန်တရားတချို့ကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ပြောဆိုဖို့ ခွင့်မပေးပါဘူးလေ….မဟုတ်ဖူးလား…ဒီတော့ ကျမ ညစ်တယ်…ဖောက်ပြန်တယ်…တဏှာကြီးတဲ့ မိန်းမစာရင်းထဲလည်း ကျမ မပါချင်ဘူး တဏှာကြီးသူ မဖြစ်ချင်ဘူး…ဒီတော့ သောက်တယ် မူးတယ် မူးတော့ မေ့မယ် ဒါကြောင့် သောက်တယ်… သီတာ ချစ်ထွန်းကို မထေမျက်မြင် တဲ့တဲ့ပြုံးပြပြီး အရက်ခွက်ကို မော့၍ သောက်ချလိုက်သည်။ တက်တက်စင်သွား သော အရက်ဖန်ခွက်ထဲသို့ အရက်ထပ်ဖြည့်ရန်အတွက် ပုလင်းကို လက်လှမ်းလိုက်ပြန်သည်။
တော်ပြီ…သီတာ…သီတာ လွန်နေပြီ… ချစ်ထွန်းက ဖြူလွှသွယ်လျှသော သီတာ၏ လက်လေးကို ဆတ်ကနဲ အပေါ်မှ အုပ်ကိုင်ပြီး ဟန့်တားသည်။ သီတာက သူ့လက်ကို ခပ်တင်းတင်း ဆုတ်ကိုင်ထားသော ချစ်ထွန်း၏ မျက်နှာကို ဆတ်ကနဲ မော့ကြည့်သည်။ ရှင်…ကျမ အသားကို မထိနဲ့ ကိုချစ်ထွန်း… သီတာ…ထပ်မသောက်နဲ့လေ… ဒါ ကျမ အခွင့်အရေးပါ…ရှင့် အပူမပါဘူး သီတာ့ အတွက် ကျနော် တားနေရတာပါ… ဟင်း…ဟင်း…ဟင်း…ကိုချစ်ထွန်း ရှင်ဟာ အတော်မတရားတဲ့သူဘဲ…ဟင်း…ကျမ အရက်သောက်တာကို တားတယ်နော်…ဟိုကားရုံက အခန်းထဲမှာ ရှင် ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို တစ်ညလုံးခေါ်ပြီး လုပ်နေတာကျတော့ အဲ့ဒါ လူကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အကျင့်လား ကိုချစ်ထွန်း… ချစ်ထွန်းက ဆုတ်ကိုင်ထားသော သီတာလက်လေးကို ကယောင်ကတမ်းလွှတ်လိုက်မိရင်း ကုန်းထားသော ခါးကို ဆန့်၍ ရပ်လိုက်သည်။
ပြောလေ…ကိုချစ်ထွန်း ကျနော်က ယောက်ျားလေးပါ သီတာ… အော်…အော်…ယောက်ျလားတော့ ဖာချလို့ရတယ် မိန်းမက ယောက်ျားကို ခံချင်တယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုလုပ်ကြ သလဲဟင်… တော်တော့ သီတာ…သီတာ သိပ်မူးနေပြီ… ချစ်ထွန်း၏ စိတ်ထဲ၌ မကြာမီ တစုံတရာ အမှားအယွင်းကြီး မှားယွင်းသွားမည်ကို စိုးရိမ်သွားသည်။ သီတာ သောက်မည့် အရက်ခွက်ကို ချစ်ထွန်းက အမှတ်မဲ့လိုဖြင့် တိုက်ချလိုက်သည်။ ယောက်ျားတွေ မူးသလို မိန်းမတွေရော မူးလို့ မရဘူးလား ကိုချစ်ထွန်း…ရမ်းလို့မရဘူးလားဟင်…ကိုယ်လုပ်ချင် တာကို စွပ်ပြီးလုပ်ပစ်ဖို့ လောကကြီးက ဘာလို့ခွင့်မပြုတာလဲဟင်… ဒေါသနှင့် ဒယိမ်းဒယိုင်ထရပ်ရင်း အော်ပြောလိုက်သော သီတာတစ်ယောက် ဆိုဖာပေါ်သို့ ဝရုန်းသုန်းကား ပြန်ပြီးလဲ ကျသွားရာ သူမ၏ ခပ်ရော့ရော့ထဘီလေးက ဖျတ်ကနဲ ကျွတ်ပြီး ပေါင်လည်ထိ လျှောဆင်းသွား၏။ ဆီးခုံမှ မွှေးညှင်းနုနုနှင့် အိဝင်းမှည့်တင်းနေသော တင်ပါးကြီးအစုံက မိမွေးတိုင် ဖမွေးတိုင်းဖြစ်ကာ ချစ်ထွန်း၏ မျက်လုံးများကို ပြူးကျယ်သွားစေ သည်။
ကိုချစ်ထွန်း… ဗျာ…သီတာ… ရှင် သီတာကို မသနားဘူးလား ဟင်… သ..သနားပါတယ်…သီတာ… ကျမကို နားရောလည်ပြီလား ဟင်… ငိုသံအက်အက်လေးနှင့် ပြောရင်း သီတာ၏ လက်လေးတစ်ဖက်က သူမ၏ စောက်မွှေးလေးများကို ရွရွှလေးပွတ်၏။ ဆိုဖာကို ကျောမှီထားရင်း အခြားလက်တစ်ဖက်ဖြင့်လည်း ဝင်းစက်စက် နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ဆွဲလှန်လိုက်သည်။ ပြောလေ…ကိုချစ်ထွန်း… နား…နားလည်ပါတယ်…သီတာရယ်… ချစ်ထွန်း၏ ဒူးတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်နေသည်။ အိအိစိုစို ခန္ဓာကိုယ်မယ်လေး၏ ရာဂခိုးဝေသော မျက်လုံးအစုံကိုပင် သူရင်မဆိုင်ရဲပေ။ မဖြစ်စဖူး ရင်ခုံသံကြီးက ကျယ်လောင်စွာ ထွက်ပေါ်လာပြီး အလိုလိုနေရင်း ရင်မောလာသည်။ ကျောက် ရုပ်ကြီးတစ်ရုပ်နှယ် ခြေစုံရပ်ကာ လက်နှစ်ဖက်ကို ဆန့်ဆန့်ကြီးချရပ်နေသော ချစ်ထွန်း၏ ပုဆိုးကြားမှ တစုံတရာသည် ထောင်၍ထကာ ရှေ့သို့ငေါထွက်လာသည်။ သီတာက ဒါကို မြင်သည်။ ပြုံးရိပ်လေးသန်းနေသည်။ ဗိုက်အောက်မှ ကွေးဆင်း ငုံ့ဝင်နေသော စောက်ပတ်လေးကို အထက်သို့ကော့တင်ပစ်လိုက်ပြန်သည်။
အသားဆွတ်ဆွတ်ဖြူသော သီတာ၏ စောက်ပတ်ကြီးမှာ ဖောင်းအိစွင့်ကားနေပြီး စောက်ပတ်တစ်ခြမ်းကို လက်ကလေးနှင့် မသိမသာဆွဲဖြဲထားသဖြင့် ရဲနေသော အတွင်းသားနီနီလေးကို ကြည့်ရင်း ချစ်ထွန်း တံတွေးကို ဂလုကနဲ မြိုချလိုက်မိလေသည်။ ထိုင်းကနဲ ထောင်းကနဲ အချုပ်အထိန်းမရှိ ထောင်လာသော လီးတန်ကြီးက ပုဆိုးကြားမှ အရုပ်ဆိုးစွာ ထိုးထွက်လာ ပါလေသည်။ ချစ်ထွန်း၏ ခြေအစုံက မူလီစုပ်ထားသလို မရွေ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသာ သံလိုက်အား အဆွဲခံရသော သံထည် ကြီးတစ်ခုလိုရှေ့သို့ ငိုက်ငိုက်သွားလိုက် ပြန်ပြီး တင်းမတ်လာလိုက်ဖြစ်နေသည်။ ရှင်…ကျမကို နားလည်တယ်ဆို… အစ်တစ်တစ် တိုးအက်အက် အသံလေးက ရှတတလေး တိုးညှင်းငြိမ်သက်စွာ ပေါ်လာသည်။ ချစ်ထွန်းစိုက်ကြည့်နေ သည့် စောက်ပတ်ဖွေးဖွေးကြီး၏ အကွဲကြောင်းရဲရဲလေးထဲမှ စောက်စေ့နီနီလေး။ လာလေ…ကိုချစ်ထွန်း… သံလိုက်ဆွဲငင်အားထက် ပြင်းသော ဣတ္ထိယဆွဲငင်အားကြောင့် ချစ်ထွန်းသည် သီတာရှိရာသို့ ဒရွတ်တိုက်ကြီး ရွေ့လျားရောက်ရှိသွားသည်။ သီတာက ချစ်ထွန်း၏ ပုဆိုးကို ဆွဲ၍ချွတ်ချလိုက်သည်။
ဒိုင်းကနဲ ပုဆိုးကြားမှ ကန်ထွက်လာ သော ကြီးမားတင်းပြောင်နေသော လီးတန်ကြီးကို သီတာက ဖောင်းကစ်ဖြူဖွေး၍ သွယ်လျှနေသော သူမ၏ လက်ချောင်း လေးများဖြင့် အထက်အောက်ဆင့်ကာ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဖွဖွလေး ဆုတ်ကိုင်လိုက်ပြီး လီးတန်ကြီးကို ဖြဲချလိုက်သည်။ လီးတန်ကြီး၏ ထိပ်ဖူးကြီးက ညိုမဲနေပြီး အတွင်းပိုင်း ဒစ်အောက်ခြေ၌ အနည်းငယ်နီရောင်သန်းနေသည်။ ဆုတ်ကိုင်ထား သော သီတာ၏ လက်လေးနှစ်ဖက် အတွင်း၌ လီးကြီးမှာ လျှံထွက်နေသည်။ တစ်ပတ်ဆုတ်၍ မနိုင်အောင် လုံးပတ်ကြီးက ထွားကြိုင်းလှသည်။ ရှင်ဟာ ယောက်ျားပီသလွန်းသူ တစ်ယောက်ပဲ ရှင်… သီတာက အသိတရားမဲ့သော ကာမနွံအတွင်းသို့ တရစ်ရစ်တိုးဆင်းနစ်မြုပ်စပြုလာသည်။
ရွှမ်းစိုနီရဲသော နှုတ်ခမ်း လေးအစုံဖြင့် လီးတန်ကြီးကို ငုံလိုက်ကာ အတွင်း၌ လျှာဖျားလေးဖြင့် မထိတထိလေး ကလိ၏။ အ….ကျွတ်…အင်း…အင်း…အင်း…သီတာရယ်… ချစ်ထွန်း၏ လက်နှစ်ဖက်က သီတာ၏ နောက်ကျောမှ ဆိုဖာကျောမှီကို ဆတ်ကနဲ လှမ်း၍ ထောက်လိုက်သည်။ ဆီးခုံကြီးပေါ်၌ ထောင်ထနေသော လမွှေးကြီးများမှာ ရှဲကနဲ ထောင်ထသွားပြီး ထောင်ထ အုံကြွကုန်သည်။ ပေါင်ခြံတဝိုက် သာမက ဖင်ကြီးများပါ ကြက်သီးလေးများ အစီအရီပေါ်ထွက်လာကြသည်။ သီတာက ပါးစပ်အတွင်းမှ ဒစ်ကြီးကို အသာပြန် ဆုတ်ပြီး ဒစ်ချိုင့်ထဲသို့ လျှာဖျားလေးဖြင့် ခပ်ဖိဖိလေး ထိုးဖိကာ ရစ်ဝိုက်ကစားလိုက်သောအခါ…
အား…အား….သီတာ…သီတာ…ရယ်…အဟင်း…ဟင်း…. ချစ်ထွန်း၏ ပေါင်ကြီးနှစ်ဖက်က ဘေးသို့ ကားသွားပြီး သီတာ၏ ပါးစပ်လေးထဲသို့ လီးကို ဖိသွင်းလိုက်မိ၏။ လက်နှစ် ဖက်ဖြင့် တင်းတင်းဆုတ်ကိုင်ထားမှုကြောင့် လီးကြီးက သီတာ၏ ပါးစပ်ထဲသို့ (၂)လက်မခန့်သာ ဝင်သွား၏။ သီတာက လီး ထိပ်ဖူးကြီးကို မိမိရရစုပ်ထားပြီး သူ၏ လျှာလေးကို မာကျစ်လျှက် ဒစ်ကြီးကို ဝိုက်၍၎င်း ထိပ်ဖူးကြီးကို လျှာဖျားဖြင့် ထိုးလိုက် လျှာပြားဖြင့် ယက်လိုက် လုပ်ပေးသည်။
ဟား…အား…အို့အိုး…ကျွတ်…ကျွတ်…ကျွတ်…. ချစ်ထွန်း၏ မျက်နှာကြီးက မျက်နှာကျက်ဆီသို့ မော့လိုက် သီတာလုပ်နေပုံကို ငုံ့ကြည့်လိုက်ဖြင့် ဂဏာမငြိမ်အောင် ဖြစ်နေပြီး နှုတ်ခမ်းကိုလည်း လျှာဖြင့် အကြိမ်ကြိမ်ယက်နေမိသည်။ လီးတန်ကြီးကမူလထက် (၂)ဆခန့် ထွားလာပြီး အံ့ဖွယ် ကောင်းလောက်အောင်ပင် မာကြောလာ၏။ အကြောများ အပြိုင်းပြိုင်းထလာသည်။ ခပ်မော့မော့ကြီး ထောင်နေသော လီးဒစ်ကြီးက မီးချောင်းရောင်ဖြင့် တဖြတ်ဖြတ်တောက်ပကာ တံတွေးလေးများဖြင့် စိုစွတ်ပြောင်တင်းလာသည်။ ရှင်…ဒီမှာထိုင်ပါလား ကိုချစ်ထွန်း… သီတာက ချစ်ထွန်းကို လေးယောက်ထိုင် ဆိုဖာကြီးပေါ်၌ ထိုင်ခိုင်းသည်။ ချစ်ထွန်းကလည်း သံပတ်ပေးထားသော အရုပ်တစ်ရုပ်ပမာ ထိုင်ချလိုက်သည်။ ချစ်ထွန်း၏ လီးတန်ကြီးက ကိုးဆယ်ဒီဂရီ မတ်တောင်ပြီး ခေါင်းမော့လျှက်ရှိသည်။ သီတာက သူမထဘီကို ခြေထောက်မှ ချွတ်ယူပြီး ဆိုဖာလက်တန်းပေါ်သို့ တင်ထားလိုက်သည်။
ထဘီမရှိသော သီတာ၏ အောက်ပိုင်းကြီးက ယောက်ျားနှင့် လေးလ လောက်ဝေးသွားသည့်အချိန်မှာပင် အားသစ်အင်သစ်တွေနှင့် ဖွံ့ဖြိုးစွင့်ကားလျှက် ပိုမိုတင်းမောက်လျှက်ရှိလေသည်။ သီတာ၏ ခြေတစ်ဖက်က ချစ်ထွန်း၏ ခါးမှ ဖြတ်လျှက် ကျော်ခွလိုက်စဉ် ကြမ်းရှရှ ခြေဖဝါး လေးနှင့် လီးထိပ်ကြီးကို တိုက်မိသွားသေးသည်။ အို…ကန်တော့… သီတာက ရုတ်တရက် တောင်းပန်ရင်း ချစ်ထွန်း၏ ပုခုံးနှစ်ဖက်ကို သူမ၏ လက်လေးနှစ်ဖက်ဖြင့် စုံကိုင်ကာ ချစ်ထွန်း၏ လီးတဲ့တဲ့ပေါ်သို့ စောက်ပတ်အဝကိုတေ့ပြီး ဖြေးဖြေးချင်းထိုင်ချသည်။ ဗြစ်…ပြွတ်…ဗြစ်…ဘလွတ်… အား…အား…နာတယ်…သိလား… ချစ်ထွန်းက သီတာ၏ ခါးလေးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဇတ်ကနဲ ဆုတ်ကိုင်ရင်း ခပ်တိုးတိုး အော်လိုက်သည်။ သီတာက ကြားဟန်မတူ တင်းရင်းပြည့်အင့်စွာ လိုးသွင်းနေသော အရသာကို အံလေးကြိတ်ကာ ခံစားရင်း မျက်နှာကို အပေါ်မော့ပြီး ဂွေးစိနှင့် ဖင်ကြီးထိသည်အထိ ထိုင်ချလိုက်လေသည်။
ဗြစ်…ဗြစ်…ဒုတ်… အေ့…အင်း… သီတာ၏ ဖင်ကြီး ချက်ချင်းပြန်ကြွတက်သွားသည်။ ရှည်လျှားသော လီးကြီးက စောက်ခေါင်းနုနုလေးကို မာကြောစွာ ထိုးဆောင့်မိသွားပုံရလေသည်။ နို့ကြီးနှစ်လုံးက ချစ်ထွန်း၏ မျက်နှာရှေ့ဝယ် အိပဲ့ အိပဲ့နှင့် ရှိနေသည်မို့ ချစ်ထွန်းက သီတာ၏ မက်မောဖွယ်ကောင်းလှသော နို့ကြီးနှစ်လုံးကို တစ်လုံးပြီးတစ်လုံး အားရပါးရကြီးစို့နေမိသည်။ သီတာ၏ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှ သွေးသားများ စုပြုံပေါက်ကွဲသွားသည်။ စောက်ခေါင်းထဲမှ အရေများက ဒလဟော ပြိုဆင်းလာကြသည်။ ချစ်ထွန်း၏ မာတင်း မာကြောနေသော အကြောတွေထနေသည့် လီးတန်ကြီးကို တစတစ စိုစွတ်ပြောင်ဝင်းသွားစေသည်။ သီတာက ဇွတ်ကနဲ ဇွတ်ကနဲ ထိုင်ချလိုက်တိုင်း လီးကြီးထိပ်ဖျားက အစွမ်းကုန် ပြဲကားထားသော သီတာ၏ စောက်ခေါင်းထဲသို့ တိုး၍ တိုး၍ သူမ၏ စောက်စေ့လေးကို ဖိပွတ်ကာ ဝင်၍သွားသည်။
သီတာ၏ ဖင်သားကြီးများက အောက်မှ ဆိုဖာပေါ်တွင် ထိုင်နေသော ချစ်ထွန်း၏ ပေါင်ပေါ်သို့ ထိုင်ချမိလျှက်ပင် ချစ်ထွန်း၏ သန်မာသော လက်နှစ်ဖက်က သူမ၏ ဂျိုင်းအောက်မှ လျှို၍ သီတာ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို ကြုံး၍ ဖက်လိုက်ကာ မတ်တပ်ရပ်လိုက်တော့ရာ သီတာ၏ ခြေထောက်လေးနှစ်ဖက်ကလည်း ချစ်ထွန်း၏ ခါးကြီးကို ချိတ်ကိုင်ညှပ်လိုက်ကာ သီတာ ခမျာ သန်မာထွားကြိုင်းသော ချစ်ထွန်း၏ လီးကြီးပေါ်၌ ဒန်းစီးနေရသလို ခပ်ကော့ကော့လေးပါသွားလေသည်။ ဘယ်လို လိုးမလဲဟင်…ကို စားပွဲပေါ်ကို တင်လိုးပေးမယ်လေ… အင်…မကြိုက်ပါဘူး… သီတာက ချစ်ထွန်း၏ လည်ပင်းကို ဟီးလေးခိုကာ မျက်စောင်းလေးထိုးကာ နှုတ်ခမ်းလေးကို စူတူတူလေး လုပ်၍ ပြောသည်။ အို…ကဲပါ…ပထမ တစ်ချီတော့ ကို ကြိုက်သလိုလုပ်…နောက်တစ်ချီကျမှ သီတာပြောသလိုလုပ်…ဒါပဲ… ချစ်ထွန်းက သူမကို ဒီအတိုင်းပင်ထား၍ လက်တစ်ဖက်က သူမ၏ ခါးကို သိုင်းဖက်ကာ လီးကြီးကို တစ်ချက် ညောင့် လိုက်သည်။
ပြွတ်… အင့်… ကဲပါ…အခုနက အကိုပြောသလိုပဲ စားပွဲပေါ်တင်ပြီး လုပ်ကြည့် လိုးကြည့်အုံးလေ… သီတာ၏ အပြောနွဲ့နွဲ့ တိုးတိုးလေးနှင့် သီတာ၏ အပြုံးနုနုချွဲချွဲလေးတွေသည် ချစ်ထွန်းကို တင်းတင်းကြီး ရစ်ပတ် နှောင်ဖွဲ့မိကြသည်။ ချောမောလှပလွန်းသော စည်းစိမ် ဥစ္စာ ကြွယ်ဝလွန်းသော သီတာကို လိုးခွင့်ကြုံရသည့်အတွက် ချစ်ထွန်း ကျေနပ်အံ့သြနေရသည်။ သီတာကို စားပွဲပေါ် ပက်လက်လေး တင်လိုက်ပြီး ခြေနှစ်ဖက်ကို အထက်သို့ တွန်းတင် လိုက်သည်။ ထိုအခါကျမှ စောက်ပတ်ဖြူဖြူကြီးထဲသို့ တင်းကြပ်ပြည့်ကြပ်စွာ ထိုးသွင်းထားသော လီးမဲမဲကြီးကို ထင်ရှားစွာ တွေ့ရသည်။ ချစ်ထွန်းသည် ကြမ်းပြင်ပေါ်မှပင် မတ်တပ်ရပ်ကာ သီတာ၏ ဖြူဖွေးသော စောက်ပတ်ကြီးကို ဆွဲဖြဲလိုက်ပြီး လီးတန်ကြီးကို သီတာ၏ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲမှ တဆုံးနီးပါး ဆွဲထုတ်၍ ပြန်၍ တဆုံးဝင်အောင်ပင် ဆောင့်၍ လိုးသွင်းချလိုက် လေသည်။
ပြွတ်…ဗြစ်…ဘွပ်… အမလေး…ကိုရယ်…ကျွတ်…ကျွတ်… စားပွဲပေါ်လဲလျှောင်းထားသော သီတာ၏ ကျောပြင်လေးက စားပွဲပေါ်မှ ကြွတက်သွားပြီး ပြန်ကျသွားသည်။ ဖြူဝင်း အိစက်သော စောက်ပတ် ဖွေးဖွေးကြီးထဲသို့ ညိုမဲပြောင်တင်းနေသော လီးတန်ကြီးက ဇိကနဲ ဇတ်ကနဲ ဆောင့်သွင်းလိုက်ပြန် သည်။ ပြွတ်…ပြွတ်…ပြွတ်… အ….အမလေး…အသဲကို ခိုက်သွားတာဘဲ ကိုရယ်…အား…ဟင်း…ဟင်း… ချစ်ထွန်း၏ လီးတန်ကြီးက သီတာ၏ စောက်ပတ်ကြီးထဲသို့ မဆန့်မပြဲဝင်ကာ သူမ၏ စောက်ပတ်ဝမှ စောက်စေ့ လေးကို ဖိ၍ ပွတ်တိုက်နေရာ သီတာမှာ ဖြတ်ဖြတ်လူး၍နေရသည်။
ပြွတ်…ပြွတ်…ပြွတ်…အား….အ…. အား…ကျွတ်….ဆောင့်… .အားရပါးရဆောင့်စမ်းပါ….လိုးစမ်းပါ ကိုရယ် သီတာကို မညှာနဲ့ သိလား…အ…အား…ဆောင့်….ဆောင့်စမ်းပါ…. သီတာသည် သူမ၏ မျက်လုံးလေးကို မဖွင့်သေးဘဲ တတွတ်တွတ်ပြောလိုက် စောက်ပတ်ကြီးကို ကော့ပေးလိုက်ဖြင့် အငြိမ်မနေဘဲ ခေါင်းလေးကလည်း ဘယ်ညာရမ်းခါ၍ နေလေသည်။ ချစ်ထွန်းကလည်း တကယ်ကို အားရပါးရကြီးပင် ဆောင့်၍ ဆောင့်၍ လိုးနေသည်။ ပြွတ်…ပြွတ်…ဗြစ်…ပြွတ်…ဗြစ်… ဆောင့်…နာနာသာ ဆောင့်…သိလား သီတာ ခံနိုင်တယ်…အထဲမှာ တစ်ချက် တစ်ချက်ပဲ ကျင်ကနဲ ကျင်ကနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားတာ သီတာခံနိုင်ပါတယ်…ဆောင့်ထည့်လိုက်စမ်းပါ…ကိုရယ်…ခပ်နာနာလေးသာ ဖိဆောင့်…ဆောင့်…ဆောင့် အုံး… သီတာသည် ရမ္မက်စိတ်တွေ အမြင့်ဆုံးသို့ ရောက်လာဟန်တူသည်။ တကိုယ်လုံးက အကြောတွေက တင်းလာပြီး တွန့်လိမ်ကောက်ကွေးလာသည်။ သီတာ၏ လက်ကလေးများက သူမ၏ ဆီးစပ်တွင်ပေါက်နေသော စောက်မွှေးလေးများကို ဖိ၍ ပွတ်လိုက် ကြီးမားသော သူမ၏ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ဆွဲညှစ်လိုက်ဖြင့် မချိမဆန့်ခံစားနေရလေသည်။
ပြွတ်…ဘွတ်…ဘွတ်…ပြစ်….ဗြစ်… အာ…ဟား…အင့်….အ…ဟား… .ရှီး…ကျွတ်… ချစ်ထွန်း၏ ဖင်ကြီးက အနောက်သို့ ဆုတ်ဆုတ်ပြီး အားယူကာ လီးချောင်းကြီးကို စောက်ဖုတ်ထဲမှ ဆွဲ၍ ဆွဲ၍ ထုတ် လိုက်တိုင်း လီးချောင်းကြီးတစ်လျှောက် တောက်ပြောင်ကာနေရသည်။ လီးတန်ကြီးကို ဆောင့်သွင်းလိုက်တိုင်း စောက်ပတ် အုံကြီးက ဖောင်းကနဲ ကြွတက်သွားပြီး လီးတန်ကြီးက အရှိန်ဖြင့် စောက်ဖုတ်ကြီးထဲသို့ မြုပ်၍ မြုပ်၍ ဝင်သွားရလေသည်။ အင့်…အင်း….ကောင်းလိုက်တာ….ကိုရယ်….အင့်…ဟင်း…ဟင်း…. သီတာက တဖြေးဖြေး ငြိမ်သက်စပြုလာရင်း ပါးစပ်မှ မပွင့်တပွင့်လေး ညီးရှာလေသည်။
သီတာ….ပြီးသွားပြီလား…ဟင်… သွားပါ…သူက သိပ်ကြာတာဘဲ…သီတာဖြင့် နှစ်ခါတောင်ပြီးသွားတယ်…သူ သိပ်ထန်တာဘဲ…ဟွန်း… သီတာက ရမ္မက်ရှိန်မပြေသေးဟန်ဖြင့် ခပ်ညုညုလေးပြောသည်။ အကိုက မပြီးသေးဘူး…ဆက်လိုးအုံးမှာ သီတာ အလိုးခံနိုင်သေးတယ် မဟုတ်လား… ခံမယ်…ဘာလို့ မခံနိုင်ရမှာလဲ ရှင် လိုးနိုင်သမျှ ကျမက ခံမယ်… ဟုတ်ပြီ…ဒါဆိုရင် အကိုက ဒီပုံစံအတိုင်းဘဲ ဆက်လိုးမယ်… စကားပြောနေရင်းက ချစ်ထွန်း၏ ကိုယ်လုံးကြီးက တလှုပ်လှုပ်နှင့် ဖြစ်နေသဖြင့် သီတာ၏ စောက်ပတ်ကြီးထဲသို့ တစ်ဆုံးဝင်၍နေသော ချစ်ထွန်း၏ လီးတန်ကြီးက တလှုပ်လှုပ်ဖြင့် ဖြစ်၍နေသဖြင့် သီတာ၏ စောက်ပတ်အတွင်းသားနုနု လေးများကို လီးတန်ကြီးက ပွတ်သပ်ထိုးဆွသကဲ့သို့ ဖြစ်နေလေသည်။ အင်း…လုပ်…လုပ်ချင်လဲ လုပ်လေ…အကို ကလဲ… သူမ၏ ဝတ်လစ်စလစ်ကိုယ်လုံးလေး တစ်ခုလုံးကို မျက်တောင်မခတ် ခဏတာ ရပ်၍ ကြည့်နေသော ချစ်ထွန်းကို သီတာက စိတ်မရှည်စွာဖြင့် ပြောသည်။ သီတာ၏ စကားအဆုံးမှာပင် ချစ်ထွန်းက သူ၏ လီးတန်ကြီးကို သီတာ၏ စောက် ခေါင်းထဲမှ ဆွဲထုတ်ကာ ဆောင့်၍လိုးတော့သည်။
ချစ်ထွန်း၏ အသက်ပြင်းပြင်းရှုသံ၊ သီတာ၏ ညီးညူ မြည်တမ်းသံများ သည် အခန်းထဲတွင် ပဲ့တင်ထပ်၍နေသည်။ ထို့ပြင် ဆီးစပ်ချင်းရိုက်မိရာမှ ထွက်ပေါ်လာသော တဖတ်ဖတ်ဆိုသော အသံနှင့် ချစ်ထွန်း၏ ဂွေးအုကြီးတွေက သီတာ၏ ဖင်ဆုံကြီးကို ထိမိတဲ့ အသံတဖျတ်ဖျတ်ဆိုသော အသံတွေမှာ ဆက်တိုက်ထွက်ပေါ် ၍ နေရလေသည်။ စောက်ရည်များ စိုရွှဲနေသော သီတာ၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ ချစ်ထွန်း၏ လီးချောင်းကြီးက တရှိန်ထိုးဆောင့် ထိုးသွင်းလိုက်သော တဘွတ်ဘွတ် အသံများကလည်း ဆက်တိုက် ထွက်ပေါ်၍နေလေသည်။
ဘွတ်..ဖတ်…ပျပ်…ဘွပ်…ဗြစ်…ပြွတ်.ဘွတ်…. အားပါး…ရှီး…ဆောင့်….ဆောင့် ကျမကို တအားဆောင့်လိုးစမ်းပါရှင်…ဟင်း…ဟင်း…အကို့ လီး ချောင်းကြီး တစ်ချောင်းလုံး အဆုံးထိ တချက်ထဲနဲ့ ထိုးစိုက်လိုက်စမ်းပါ…ခံလို့ ကောင်းလွန်းလို့ပါ…အင်း…အား…ပါး… ဟင်း… ဘွပ်…ဗြစ်…ပြွတ်…ပလွတ်…ဘွပ်… အား ဟုတ်ပြီ…အဲလို…အဲလို…ဟင်း…ဆောင့် ဆောင့်…အဖုတ်ကွဲချင် ကွဲသွားစမ်းပါစေ….အမလေး. …ကောင်းလိုက်တာ ရှင်…အား… အားပြင်းထိမိလှသော ချစ်ထွန်း၏ ဆောင့်ချက်တွေကို ရင်သိမ့်တုန်အောင်ခံရင်း သီတာတစ်ယောက် နောက်တစ်ချီ ထပ်ပြီး သွားသည်။ သူမ၏ လင်ယောက်ျားနဲ့ပင် တချီကောင်းလောက်သာ ပြီးခဲ့သော သီတာတစ်ယောက် ချစ်ထွန်း လိုးတာကို ခံရတော့မှ တသက်နှင့်တကိုယ် ဆက်တိုက်ပြီးတဲ့ အရသာကို တုန်ခါ မောဟိုက်အောင် ခံစား၍ နေရတော့သည်။ သီတာ (၃)ချီမြောက်ပြီးသွားသည့်အချိန်တွင် ချစ်ထွန်းသည် တရှူးရှူးဖြင့် အသက်ရှူတွေ အရမ်းမြန်လာသည်။
ဆောင့်လိုး ချက်တွေကလည်း ကြမ်းသထက် ကြမ်း…မြန်သထက် မြန်၍လာသည်။ ချစ်ထွန်း တစ်ယောက် ပြီးကာနီး၍လာပြီဆိုသည်ကို သီတာက သိသည်။ ချစ်ထွန်းတစ်ယောက် အရသာ ပိုရှိအောင် လုပ်ပေးချင်သော သီတာက သူမ၏ ဖင်လုံးလုံးကျစ်ကျစ် လေးကိုအသာ ပတ်ကျော်ပြီး ချစ်ထွန်း၏ ဂွေးအုများကို လက်နဲ့အသာ လှမ်းကိုင်လိုက်ပြီး ဖွဖွလေး ဆုတ်နယ်ပေးသည်။ ချစ်ထွန်းတစ်ယောက် အရသာတွေ့သွားတာ သေချာသည်။ အသက်ရှူတာ ပိုမြန်လာသလို ဆောင့်လိုးချက်တွေက လည်း ပို၍အားပြင်းပြီး ပို၍ ကြမ်းလာသည်။ ထို့နောက် ချစ်ထွန်း၏ လီးကြီး ငေါက်ကနဲ ငေါက်ကနဲ ဖြစ်သွားချိန်မှာပင် သီတာ က သူမ၏ စောက်ဖုတ်ကို ညှစ်၍ သူ၏ လီးကြီးကို စောက်ဖုတ်ဖြင့် ညှစ်ယူလိုက်တော့ရာ ချစ်ထွန်း၏ လီးထိပ်က သုတ်ရည် များက ပန်း၍ ထွက်လာတော့သည်။ သီတာ၏ စောက်ဖုတ်ထဲသို့ အရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့် ပူကနဲ နွေးကနဲ သုတ်ရည်များပန်းဝင် ထိတွေ့လိုက်သည့်အချိန်မှာပင် သီတာတစ်ယောက် လေးကြိမ်မြောက် ပြီး၍ သွားရလေတော့သည်။ ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ဆန်ဒကိုဘယျလိုအစားထိုးရမှာလဲ